Rajadi ay kooxda Kooxda Tottenham Hotspur ka laheyd in ay ku guuleysato horyaalkaPremier League ayaa u muuqata in ay ceel dheer ku dhacday kadib marki ay xalay 1-0 ku khasaartay kooxda Manchester United.
Ciyaarta oo ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London ayaa waxaa goolka guusha Manchester United u saxiixay weeraryahanka da’da yar Marcus Rashford, waana guushii lixaad oo isku xigta oo uu soo hooyay tababaraha cusub ee ku meelgaarka ah ee kooxdan Manchester, Ole Gunnar Solskjaer kaasoo bedelay macalinki shaqada laga eryay Jose Mourinho.
Tottenham qeybti danbe ee ciyaarta waxay heshay 11 shuut oo ay gool u badali kareen, hase yeeshee waxay mari waayeen goolhaye David De Gea oo kubado halis ah ka badbaaiyay laacibiinta kala ah Dele Alli, Harry Kane iyo Toby Alderweireld.
Ciyaar kale oo ka tirsaneyd horyaalka Ingiriiska ayaa waxay Axadi shalay dhexmartay Everton iyo AFC Bournemouth, waxaana 2-0 ku badisay Everton.
Ciyaarihi kale ee todobaadkaan dhacay ee horyaalka Ingiriiska,
Arsenal waxaa 1-0 uga badisay West Ham United, Chelsea 2-1 ayay dirtay Newcastle United.Burnley ayaa 2-1 ku garaacday Fulham, halka Southampton ay 2-1 ku qabatay kooxda Leicester City.
Manchester City waxay maanta la ciyaari doontaa Wolves, haddii ay badiso waxay soo gaabi doontaa farqiga dhibcaha ay horyaalka ku hogaamineyso kooxda Liverpool oo Sabtidii 1-0 ku garaacday Brighton.
Liverpool waxay leedahay 57 dhibcood, waxaa kusoo xigta Man City oo leh 50, Tottenham ayaa ku jirta kaalinta sadexaad, waxay leedahay 48 dhibcood. Chelsea ayaa ku xigta oo ku jirta booska afraad, waxana ay leedahay 47 dhibic.
Manchester United iyo Arsenal waxay isla leeyihiin min 41 dhibcood, inkastoo Arsenal ay farqiga goolasha darteed kaalinta shanaad ku jirta halka United dagantahay booska lixaad.